Empire State Building hanasongadinana ireo mpivarotra pop-up hankalazana 90 taona
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Empire State Building hanasongadinana ireo mpivarotra pop-up hankalazana 90 taona
Ilay labiera vita amin'ny asa-tanana vita tamin'ny asa tanana avy any amin'ny tanànan'ny Port Morris any Bronx dia hivarotra labiera voafantina efatra - ny American Pale Ale, World Gone Hazy IPA, Smile My Guy IPA, ary Das Bronx Oktoberfest - avy amina sarety 90 taona manokana tao amin'ny Empire State Building faha-86 gorodona.
Tamin'ny taona faha-90 taonany, ny Empire State Building (ESB) dia tsy maintsy nitsoaka an-tsehatra satria nitondra Oktoberfest ho any amin'ny Observatory 86th Floor miaraka amin'i Bronx Brewery isaky ny alakamisy hatramin'ny asabotsy 14-30 Oktobra manomboka amin'ny 5-9 hariva. ny fotoana voalohany teo amin'ny tantaran'ny trano fisotroana zava-pisotro dia hatolotra ao anatin'ny Observatory Experience.
"Manohy ny fankalazana ny faha-90 taonan'ny tranobe malaza indrindra eran-tany isika amin'ity fararano ity miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Bronx Brewery tianao eto an-toerana," hoy i Jean-Yves Ghazi, filohan'ny Empire State Building Observatory. "Amin'ny fampiharana ny kalitaon'ny tontolo iainana any an-trano izay mitarika indostrialy dia afaka mankafy ireo fampirantiana an-tserasera sy an-tsokosoko izay novolavolaina tamim-pahamendrehana alohan'ny fialan-tsasatra amin'ny fisotro hariva sy ny fomba fijery 360 degre sy fahitalavitra mahavariana indrindra any New York. Afaka manolotra ny tanàna. ”
Ny STATE Grill sy Bar an'ny Empire State Building dia hanolotra cheesecakes miisa 10 $ NY miampy ny safidin'ilay mpivarotra labiera. Bronx Brewery no mpivarotra faharoa amin'ny programa pop-up Observatory an'ny tranobe aorian'ny nahomby tamin'ny volana Aogositra niaraka tamin'ny My Cookie Dealer.
"Faly izahay miara-miasa amin'ny Empire State Building hankalazana ny Oktoberfest ao afovoan'i New York City," hoy i Sean Valenti, mpitondra tenin'ny Bronx Brewery. “Ny asanay dia mihodinkodina amin'ny fiarahamonina, ny fahaiza-mamorona ary ny fampiraisana, izay zavatra rehetra tonga ao an-tsaina rehefa mieritreritra ny Empire State Building izahay.”
Entanina ny mpitsoka hisotro ny zava-pisotro ataon'izy ireo ao amin'ny Observatory gorodona faha-86 sy hametaka sary miaraka amin'ny #PopUpTop hahazoana manasongadina ao amin'ny fantsom-piarahamonina ESB. Ny pop-up isam-bolana ho avy ao amin'ny Empire State Building Observatory dia havoaka misaraka.